Alaab Dabiici Ah Oo Caawisa Wajiga Saliida Iyo Finanka leh - Daryeel Magazine
Alaab Dabiici Ah Oo Caawisa Wajiga Saliida Iyo Finanka leh
Dadka inta badan way iska tuuraan qolofta liin macaanta markay isticmaalaan kadib, balse ma ogtahay in qolofta liinta ay ka buuxaan nafaqooyin iyo waxyaabaha jirka sunta ka saaraa ee loo yaqaan antioxidants”?? Qolofta liin macaanta waxaa ku jira vitamin C ka badan kan gudaha ku jira.
Nafaqooyinka ku jira qolofta liinta macaan iyo waxtarkooda:
Vitamin C: Wuxuu la dagaallamaa finanka, waxaana uu kobciyaa caafimaadka maqaarka.
Calcium: waxay cusboonaysiiyaa unugyada maqaarka ee duqoobay. Waxay uu fiican tahay daaweynta qalaylka, qolofta iyo cuncun maqaarka.
Macdanta Potassium: Waxay u fiican tahay fuuq-baxa, waxayna caawisaa qoynta dubka.
Magnesium: Waxay kordhisaa dhalinyaranimada iyo iftiinka maqaarka jirka.
Ma leedahay waji u nugul finanka?
Ha welwelin, Hafza ayaa kuu haysaa mask u fiican wajiga saliida leh iyo weliba finanka. Jirku waxa uu leeyahay qanjirro subka maqaarka sare, qanjirradaan waxay soo daayaan saliid loo yaqaan (sebun) liin macaantu waxay caawisaa in jirku uu saaliidaan nuugo isla markaana uusan qalalin.
Daldaloolada Wajiga (Open Pores) Qiimaha Caafimaad Ee Saliida Dhaga Yaraha Iyo Sida La Iskugu Daaweeyo Ma Rabtaa Wax Dabiici Ah Oo Wajiga Kuu Nuuriya? Faa’iidooyinka Saliida Saytuunka Iyo Sida Loogu Qurxiyo Jidhka & Timaha